के तपाईं ईश्वरसित घनिष्ठ हुन चाहनुहुन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ डच डेनिश ड्रेहु तामिल तेलगु त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मराठी मल्यालम माम माया मालागासी माल्टिज मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा वलिसियन वायुनाइकी वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | तपाईं ईश्वरको साथी बन्न सक्नुहुन्छ
के हामी ईश्वरसित घनिष्ठ हुन सक्छौं?
“ईश्वरसित घनिष्ठ हुँदा हामी ढुक्क र सुरक्षित महसुस गर्छौं। अनि उहाँ सधैं हाम्रो भलो चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन्छौं।”—क्रिस्टोफर, घानाका एक युवक।
“हामी निराश हुँदा ईश्वर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, हामीले सोचेभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ।”—१३ वर्षीया हाना, अलास्का, अमेरिका।
“ईश्वरसित घनिष्ठ हुन पाउनु सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा हो र यसले हामीलाई साँच्चै निर्धक्क बनाउँछ।”—जिना, ४० वर्ष काटेकी एक महिला, जमैका।
यस्तो महसुस गर्ने क्रिस्टोफर, हाना र जिना मात्र होइनन्‌। संसारभरिका थुप्रै मानिस ईश्वर तिनीहरूलाई आफ्नो साथी ठान्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्‌। तपाईं नि? के तपाईं ईश्वरसित घनिष्ठ महसुस गर्नुहुन्छ? अथवा उहाँसित अझै घनिष्ठ हुन चाहनुहुन्छ कि? सायद तपाईं सोच्नुहोला, “सबैभन्दा शक्तिशाली ईश्वरसित घनिष्ठ हुन सम्भव छ र? छ भने कसरी उहाँसित घनिष्ठ हुने?”
ईश्वरसित घनिष्ठ हुन सम्भव छ
बाइबलअनुसार ईश्वरसित व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्न र घनिष्ठ हुन सम्भव छ। ईश्वरले हिब्रूहरूका पुर्खा अब्राहामलाई “मेरो मित्र” भन्नुभएको थियो। (यशैया ४१:८) बाइबलको याकूब ४:८ मा दिइएको यो मायालु निम्तोबारे पनि विचार गर्नुहोस्: ‘ईश्वरसित नजिक होओ र उहाँ तिमीहरूसित नजिक हुनुहुनेछ।’ त्यसैले ईश्वरसित घनिष्ठ हुन अनि उहाँको साथी बन्न सम्भव छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर ईश्वर अदृश्य हुनुभएकोले तपाईं कसरी उहाँसित ‘नजिक हुन’ र घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ त?
यस प्रश्नको जवाफ पाउन मानिसहरू कसरी साथी बन्न पुग्छन्‌ भनेर विचार गर्नुहोस्। दुई जना व्यक्ति साथी बन्न सबैभन्दा सुरुमा त उनीहरूले एकअर्काको नाम थाह पाउनुपर्छ। त्यसपछि नियमित रूपमा कुराकानी गर्दा, आफ्नो सोचाइ र भावना साटासाट गर्दा उनीहरूको मित्रता फस्टाउँछ। अनि जब उनीहरू एकअर्काको निम्ति केही गर्छन्‌, तब उनीहरूको सम्बन्ध बलियो हुँदै जान्छ। ईश्वरसित घनिष्ठ हुने सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो। हामी किन यसो भन्न सक्छौं? आउनुहोस्, विचार गरौं।
ईश्वरको नाम थाह पाउनुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्
ईश्वरले बाइबलमार्फत तपाईंलाई आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। बाइबलमा यसो लेखिएको पाउँछौं: ‘यहोवा हाम्रा ईश्वर एक मात्र यहोवा हुनुहुन्छ।’